दोलखाको तामाकोशी, मेलुङ, भिमेश्वर लगायतका स्थानका लागि सय भन्दा बढि बस काठमाडौंबाट छुटे - नयाँपुल अनलाइन डटकम
प्रकाशित मिति : Tuesday, April 21, 2020 nayapulonline
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको तामाकोशी, मेलुङ गाउँपालिका र भिमेश्वर नगरपालिका सहितका नागरिकहरु लिएर आज काठमाडौंबाट सय वटा भन्दा बढि यात्रुबाहक बसहरु छुटेका छन् । तीन दिनदेखि काठमाडौंमा फसिरहेका हजारौं दोलखालीहरुलाई जिल्ला फर्काउने क्रम आज पनि त्यतिकै उत्साहका साथ भईरहेको थियो । काठमाडौंको कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको जगातीसम्मै दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली लगायत जिल्ला फर्कनेहरुको भिड लागेको थियो । त्यसमा अधिकांश दोलखालीहरु देखिन्थे ।
घर फर्कन उत्साहित भएर आएको भिड र बसहरुलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई निकै हम्मे – हम्मे परेको देखिन्थ्यो ।
आज दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका लागि केहि बसहरु छुटेका छन् । तामाकोशी गाउँपालिका ५ नं. वडाका स्थानीय भुवन केसी भिडलाई छिचोल्दै गाउँफर्कनेहरुलाई बसमा व्यवस्थापन गर्न र बस रहेको ठाउँको बारेमा बताउन मोबाइलमै व्यस्त देखिन्थे । केसी नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. “क” दोलखाका सचिवसमेत हुन् । उनले, चुनावमा भोट हाल्न चाहि तानी – तानी गाउँ लैजानेहरु महामारीको बेला चाहि कहाँ हराए अनि स्थानीय सरकार र वडा पनि छ र हाम्रोतिर ? भनि ठट्यौली पाराको प्रतिक्रिया दिए ।
यस्तै, वैशाख ८ गते हजारौं आफ्ना जनताहरुलाई घर फर्काएको मेलुङ गाउँपालिकाले आज पनि ४, ५ र ६ नं. वडाका नागरिकहरुलाई बसबाट घर पठाएको छ । आज, दोलखाका अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि काठमाडौंमा फसेकाहरु नागरिकहरु यात्रु वाहक बस रिजर्भ गरेर जिल्ला फर्किएका छन् ।